Abriil 2017 - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Bisha: April 2017
Shabakadda Caalamiga ah ee Matxafyada Nabadda: Wargeyska 25-guurada
Shabakadda Caalamiga ah ee Matxafyada Nabadda (INMP) warsidaha Maarso 2017 wuxuu si buuxda ugu heellan yahay dabaaldegga sannad-guurada 25aad. Arrinta waxaa ku jira taariikh dhammaystiran, sawir leh oo ah INMP, oo ay ku jiraan xisaab-celin kooban oo ku saabsan dhammaan shirarkii hore, iyo horumarka ururka. Laga soo bilaabo 1992, INMP waa bixiyaha ugu weyn ee aqoonta iyo macluumaadka ku saabsan matxafyada nabadda. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada Horumarinta Waara (ESD) waxay qayb muhiim ah ka noqoneysaa siyaasadaha waxbarashada qaranka
Warbixinta dalka ee Dawladaha Xubnaha ka ah UNESCO waxay daaha ka fayday in in ka badan kala badh ay ku darsadeen ESD siyaasaddooda waxbarasho ee qaran. Horumarinta siyaasadaha waxbarashada gaarka ah ee ku saabsan horumarka waara waxay umuuqataa inay dib uga dhacayso heerka waaxda waxbarashadu ay ku dhexjirayso ajendaha guud ee ESD ee siyaasadaha waxbarashada qaranka. [sii wad akhriska…]
Angola: Moxico - Xoghayaha Gobolka wuxuu difaacay Waxbarashada Xuquuqda Aadanaha ee Tababarka Booliska
Xoghayaha Gobolka ee Xuquuqda Aadanaha, António Bento Bembe, ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo isdhexgalka barashada xuquuqda aadanaha ee tababarka shaqaalaha cusub ee Booliska Qaranka. Boliiska, oo mas'uuliyadiisu tahay inay xoojiyaan sharciga, waa inay lahaadaan dareen muwaadinimo oo ka kooban ka warqabka Sharciga oo aan la sii joogi karin iyada oo aan la helin xarun dhexe ee sharafta qofka aadanaha iyo xuquuqda aadanaha ee sida saxda ah loo damaanad qaaday. [sii wad akhriska…]
Machadka Joan B. Kroc ee Nabadda & Caddaaladda ee Jaamacadda San Diego's Kroc School of Peace Studies: Aqbalaadda Codsiyada Haweenka Barnaamijka Nabadda ee Haweenka
Barnaamijka cusub ee Haweenka Nabada Sameeyayaasha ayaa siin doona is weheshi u gaar ah dhisayaasha nabadda, kaas oo diiradda lagu saarayo xoojinta iyo hagaajinta dadaallada nabadeed ee bulshooyinka ay colaaddu saameysay ee adduunka. Wadaagga 10-ka bilood ah wuxuu tan ku sameyn doonaa iyada oo la dhisayo beel ku howlan afar dhismeyaal nabadeed oo ka socda bulshooyinka ay colaaduhu aafeeyeen iyo afar wada-hawlgalayaal nabadeed oo caalami ah oo doonaya inay wax ka beddelaan awooddooda ay nabad ku wada dhisi karaan. Dambaynta Diiwangelinta: May 31, 2017. [sii wad akhriska…]
Raadi Goob Wadaage: Nabadeeyayaashu waxay Hage u yihiin Badalida Xagjirnimada Rabshada
Tilmaamahan ayaa ah midhihii wada shaqeynta Raadinta Wadajirka ah Dhul wadaagayaasha hore iyo kuwa hadda ka jira adduunka oo idil. Tilmaamahan wuxuu soo bandhigayaa aragti dheer sanado waayo aragnimo ah wuxuuna siinayaa mabaadi'da hagida ee loogu talagalay nabad-dhiseyaasha iyo xirfad -leyda dhulka marka ay marayaan aaggan muhiimka ah ee weli halista sare leh ee shaqada ee xagjirnimada rabshadaha wata. [sii wad akhriska…]
Badbaadinta Carruurta waxay raadineysaa Isku-duwaha Kooxda Shaqeynta Waaxda Waxbarashada
Doorka guud ee Isuduwaha Qeybta Waxbarshada ee Waxbarashada (ESWG) ayaa ah inay si wada jir ah u hogaamiyaan shaqada kooxda UNHCR iyo UNICEF si loo hubiyo wax ku oolka, isku xirnaanshaha, iyo bixinta saadaalinta waxbarashada iyo gargaarka ee caruurta nugul ee ay saameeyeen qaxootiga iyo dhibaatada muhaajiriinta ee Giriigga. [sii wad akhriska…]
Awoodda macallimiinta si ay u gaarsiiyaan Waxbarashada Caalamiga ah ee Jinsiyadda (GCED) waa la xoojin karaa
UNESCO waxay u xilsaartay falanqaynta warbixinnada dalka waxayna ogaatay in waxbarashada dhalashada adduunka ay ku jirto manhajka guud ahaan waddamada, laakiin aysan u badneyn inay ku jirto waxbarashada macallinka ka hor-adeegga iyo adeegga. [sii wad akhriska…]
Taageerada Joogtada ah ee Jaamacadaha Yurub ee Waxbarashada Nabadda ee Kolombiya: Warbixin ka socota Unugga Nabadda iyo Daraasaadka Khilaafaadka ee Jaamacadda Innsbruck (Austria)
Maaddaama dadaallada nabadeed ee Kolombiya ay sii soconayaan inta lagu guda jiro marxaladda adag ee hirgelinta heshiisyada nabadeed ee u dhexeeya dowladda iyo FARC-EP, dhowr jaamacadood oo ka socda Yurub ayaa booqanaya waddanka, iyaga oo wax ka baranaya isla markaana amaah siinaya habab maxalli ah oo ku saabsan nabadeynta iyo iskahorimaadka. isbadal. [sii wad akhriska…]
Manhajka dugsiga hoose si loogu daro maadada xuquuqul insaanka (Myanmar)
Waxbarashada ku saabsan xuquuqda aadanaha ayaa lagu dari doonaa manhajka cusub ee iskuulada ardayda fasalka 2-aad sanadka soo socda, ayuu yiri afhayeenka wasaarada waxbarashada. [sii wad akhriska…]